Ugbo nke ose na-emeghe n'ala | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ugbo nke ose na-emeghe n'ala
Ụzọ nke owuwe ihe ubi sọrel maka oyi
Ọtụtụ ndị nwunye nwunye na-edozi sọrel maka oge oyi na ụzọ ha, nke anaghị eme ka akwụkwọ ndị ahụ dị ọhụrụ ma dị ụtọ. Ya mere, anyi ga ekwu okwu banyere uzo nke owuwe ihe ubi charel maka oyi, nke agagh acho ka i were oge buru ibu ma obu ego. Sorel nke a na-agbọ oyi Ụzọ kachasị mfe na oge a ga-eji dozie sọrel maka oyi bụ ihicha.
Ihe ị chọrọ ịma banyere ịkụzi ose na oghe
Ose - bu otu n'ime akwukwo nri, nke nwere otutu vitamin bara uru. Omenala bụ nke dị na Solanaceae. Na ọnọdụ anyị na-eto eto, ose bụ mkpụrụ osisi kwa afọ. Agrotechnical jikoro maka ose dị ntakịrị mfe karịa tomato, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ka nwa nwa. A na-eto osisi ahụ maka ihe dị iche iche erimeri na ọ bụghị naanị.
Nkà na ugbo nke ugbo nke osisi "Claudio F1": uru na ihe di iche iche nke di iche iche
Ose "Claudio F1", nke nkọwa a maara nke ọma na ndị niile hụrụ mfri mmiri dị iche iche, na-arụsi ọrụ ike na mba anyị. Ụdị ose dịgasị iche iche a na-ewu ewu na ndị na-elekọta ubi na ndị na-adịghị ahụ anya. N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere nke a. Nkọwa ọkwa "Claudio F1" - ose Bulgarian, ụtọ.